Nkọwa nke Redmi Rịba ama 8 ka egosipụtara site na Lu Weibing | Gam akporosis
El Ihe ngosi RedN 7 Ọtụtụ ndị edepụtarala ya dị ka ọnụahịa kachasị mma maka ego dị n'etiti ama ama na ahịa, ebe ọ bụ na emepụtara ya na Jenụwarị afọ a. Nke a bịara na Snapdragon 660 dị ka ihe nkwado SoC, nke bụ nnukwu ihe ịga nke ọma kemgbe, n'agbanyeghị na onye nhazi a abanyela n'ahịa ihe dị ka afọ atọ, ọ na-aga n'ihu na-egosipụta dị ka nke na-enye arụmọrụ na oke mmiri na-agba ọsọ Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa na egwuregwu ọ bụla na-enweghị inye echiche ọjọọ.
Agbanyeghị, ọchịchị ya dịka otu n'ime ekwentị mkpanaaka kachasị mma n'afọ a, ihe doro anya, ka onye bu ya ụzọ ga-ebi, nke na-abụghị onye ọzọ karịa Ihe ngosi RedN 8. Ọ bụ site na ngwaọrụ a ka anyị lekwasịrị anya na ohere ọhụụ a, ebe ọ bụ na Lu Weibing, onye isi nke Redmi, onye wepụtara ụfọdụ akara banyere ya.
Onye isi oche ahọpụtara ahọpụtara ịga ije na Weibo, netwọkụ na-elekọta mmadụ nzipu ozi ndị China, iji kwuo nke ahụ "Igwe ọhụrụ dị n'aka", na-egosi na ya ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-anwale ya ... na site na "igwe," ọ pụtara n'ụzọ doro anya smartphone.
Redmi Rịba ama 8 hinted na Weibo
Weibing kwuru na post na ọ bugoro na ngwaọrụ a dị omimi-nke na-abụghị ihe omimi, anyị ga-ekwukwa ihe kpatara ya- na-ewe ezigbo foto nwere oke nkọwa ma doo anya ma nwee ezigbo ikike ịchị obodo, yana imepụta usoro ngebichi na nke di elu nke na-enye obi uto. Nke ikpeazụ na-agwa anyị na akụkụ nke ihuenyo ngwụcha ga-adị obere.
Ugbu a, iji dokwuo anya ihe ngosi ahụ emere na Redmi Rịba 8, Weibo kwuputara na e bipụtara post ahụ site na "Note8Android", nke kwenyere na aha mkpanaka nke anyị na-enye ohere ya ugbu a. Ya mere, anyị nwere olile anya na ozugbo elechara ule a na-eme na nke a, a ga-ewepụta ya n'oge na-adịghị anya, ikekwe n'ime ọnwa ole na ole.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » CEOfọdụ n'ime atụmatụ nke Redmi Rịba 8 ama egosiwo site n'aka CEO nke ụlọ ọrụ ahụ